Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Thaketa Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Thaketa
Thaketa Township is located in the eastern part of Yangon, Myanmar. The township comprises 19 wards and shares borders with Thingangyun Township in the north and west, the Bago River in the east, and Dawbon Township in the south. The Pazundaung Creek flows through the township. Founded in 1959, Thaketa is made up largely of middle-class and working-class neighbourhoods.5South Korean companies have teamed up to builda500-megawatt gas-fired combined cycle power plant in Thaketa Township to supply electricity to Thilawa Special Economic Zone.
Over 4,000 businesses situated in this area, over 29,400 employees working in these respective businesses, total area 12.8 sq km – Density: 172,579/sq km, Total Population 220,556 people living in this township. Postal Code - 11231, 11232
South Korean companies have teamed up to builda500-megawatt gas-fired combined cycle power plant in Thaketa Township to supply electricity to Thilawa Special Economic Zone.
၁၉၅၈ ခုနှစ် အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက်တွင် ကျူးကျော်များကို ပြောင်းရွှေ့အခြေချပေးရန် သာကေတမြို့သစ်ကို ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းစိန်က မြို့သစ်တည်ခဲ့သည်။ တည်နေရာမှာ ငမိုးရိပ်ချောင်းနှင့် ပုဇွန်တောင်ချောင်းတို့ ဆုံကြသည့် ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ မြေအမျိုးအစားမှာ နုံးတင်မြေနု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ၄ ဒသမ ၉၃ စတုရန်းမိုင် ရှိသည်။ ပတ်ပတ်လည်တွင် ငမိုးရိပ်ချောင်းနှင့် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ ပဲခူးမြစ်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်တို့ ဝန်းရံထားသည်။ ရပ်ကွက် (၁၉) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရပ်ကွက်အမည်များမှာ အမှတ် (၁) အနော်မာရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁) ထူပါရုံရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက် (မြောက်)၊ အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက် (တောင်)၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက် (မြောက်)၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက် (တောင်)၊ အမှတ် (၃) မာန်ပြေရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၃) ရန်ပြေရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် (မြောက်)၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် (တောင်)၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက် (အရှေ့)၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက် (အနောက်)၊ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက် (အရှေ့) တို့ ဖြစ်သည်။
မြို့နယ်အတွင်းတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ကုန်၌ အိမ်ခြေ (၃၂ ၂၉၅) ခုရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၄၅ ၉၇၅) စု နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၄၀၀၀) ကျော်ရှိပြီး လုပ်သားအင်အားစု (၁၉ ၄၀၀) ဦး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း Business Collection Group (BCG) ၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ စက်မှုဇုန်အနေဖြင့် သာကေတ စက်မှုဇုန် တည်ရှိသည်။ နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံများမှာ သင်္ဘောဆေးစက်ရုံ၊ ရေလုံသင်္ဘောကျင်း တို့ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆီအုန်းစက်ရုံတစ်ရုံ ရှိသည်။
ရှုခင်းသာရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသော ကြယ်ငါးပွင့်ဆိပ်ခံတံတားတွင် ကမ်းရိုးတန်းသင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းမြို့များ ဖြစ်သည့် စစ်တွေ၊ ရေး၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်း အစရှိသည့် မြို့များသို့ ပြေးဆွဲသည်။ ဝိုင်ဘီအက်စ် ဘတ်စ်ကားလိုင်းများတွင် ၄၊ ၅၊ ၉၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၇ဝ၊ ၇၆၊ ၈ဝ၊ ၈၅၊ ၉၅ တို့သည်သာကေတသို့ ပြေးဆွဲသည်။ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ယာဉ်နှင့် ရထား ကူးသန်းရန် တည်ဆောက်ထားသည့် ရန်ကုန်-သံလျင်တံတားသည် သာကေတမြို့နယ်၏ ထင်ရှားသောတံတား ဖြစ်သည်။
စာပို့သင်္ကေတမှာ ၁၁၂၃၁ နှင့် ၁၁၂၃၂ တို့ ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်ဆီ အရောင်းဆိုင်(၆) ဆိုင်ရှိသည်။ 2000၊ APM၊ Max Energy၊ PT Power၊ Shwe Byain Phyu၊ Energy တို့မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော အရောင်းဆိုင်များ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင် CNG သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင် (၂)ဆိုင် ရှိသည်။
ဟိုတယ်ကဏ္ဍတွင် ဟိုတယ် (၅) ခုရှိရာ၌ ကြယ်သုံးပွင့် ဟိုတယ် (၁)ခု၊ ကြယ်နှစ်ပွင့် ဟိုတယ် (၂) ခုနှင့် ကြယ်တစ်ပွင့် ဟိုတယ် (၂) ခုတို့ ပါဝင်သည်။ အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည့် ရှုခင်းသာ အပန်းဖြေစခန်း ရှိသည်။ အပန်းဖြေနှင့် လေ့လာရေးအဖြစ် သွားရောက်နိုင်သည့် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ လည်းရှိသည်။
ထင်ရှားသည့် ဈေးများမှာ အမှတ်(၁)ဈေး၊ အမှတ်(၂)ဈေး၊ အမှတ်(၃)ဈေး၊ အမှတ်(၅)ဈေး၊ အမှတ်(၇)ဈေး၊ ခိုင်ရွှေဝါဈေး၊ ဥယျာဉ်ဈေး၊ ဓမ္မာရုံဈေးတို့ ဖြစ်သည်။ ကုန်တိုက်များမှာ Aeon Orange နှင့် City Mart တို့ တည်ရှိသည်။
အစိုးရပညာရေးကဏ္ဍတွင် အထက်တန်းကျောင်း (၅) ခု၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၇) ခု၊ မူလတန်းကျောင်း (၄၆) ခု ရှိသည်။ မူလတန်းကြိုကျောင်း (၄၆) ခု ရှိသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း (၉) ခု ရှိသည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံဖြစ်သော ကုတင် (၁၀၀) အထူးကုဆေးရုံတစ်ခု ရှိသည်။
Kamar Kyi Bridge
UP Town Hotel
Shu Khinn Thar Int'l College
Mega Ace [Mya Yadanar]
Population In Conventional HouseHolds 21,2290 21,290
Number Of Convetional Households 45,456 45,456
•In Thakayta Township, there are slightly more females than males with 95 males per 100 females.
•The population density of Thakayta Township is 17,258 persons per square kilometre.
•There are 4.7 persons living in each household in Thakayta Township. This is slightly higher than the Union average.
Productions 64 6188
Retails 1434 3585
Wholesales 317 5201
Services 2187 13598
Trading 17 903
All about Thaketa
: Dr Wai Phyo Aung
: +959448041413
: U Than Soe
: +959428023274
: U Naing Ngan lin
: +95 450 048 599
: Daw Thet Htar Nwe Win
: +95 799 246 274
Category : Engineering Consultancy Services
Address : 1196-C, Myin Taw Thar Rd., Ward (7),
Phones : 09-977442016, 02-5154404, 09-977442017
Address : 14-A, Min Nandar Rd.,
Phones : 01-553062, 01-553063, 01-553064
Address : 1196, Myin Taw Thar Rd.,
Phones : 09-977442015, 09-977442016, 02-5154404, 09-977442011
Category : Lighting & Equipment
Phones : 09-977442015, 09-977442011